Amazinyo agxininisa, yintoni enokuyenza ukuze ufumane ngaphandle kozinyo wamazinyo? Amazinyo akhululekile: unyango kunye nezilwanyana zabantu.
Izizathu apho amazinyo anokuzikhupha kunye nendlela yokulungisa ngayo.
Amazinyo ayagxininisa kuphela kubantwana. Kwezinye iimeko, kubonakala ngathi, inyolo enempilo, inokuqala ukugubha. Ngaphambi kokuba uqale imisebenzi esebenzayo ekujoliswe ekuqiniseni amazinyo, kuyimfuneko ukugqiba ukuba yiyiphi into eyenzekayo. Ingaba sisifo se-periodontal, ukungabikho kwamavithamini okanye ukunakekelwa okungafanelekanga. Makhe sijonge izizathu kwaye sinqume indlela yokunyamekela kakuhle amazinyo, ukuba baqala ukugubha.
Okokuqala, ungakhathazeki. Ukuba uqaphela ukuba amazinyo akho aphumayo, qhagamshelana nogqirha ngcebiso. Akuyimfuneko ukulibazisa ukutyelela, nangona kungekho rhoqo ukuchithwa kwe-vacillation kudibene kuphela kunye namazinyo. Kwezinye iimeko, oku kungabonakalisa izifo ze-endocrine okanye umphumo wokunyamekela okungafanelekanga. Phakathi kwezizathu eziqhelekileyo oogqirha abathandwayo:
Ukuchithwa kwe-mineral metabolism
Izifo zenkqubo ye-endocrine
Izifo zesimo senhliziyo
Ngokuxhomekeke kwimbangela eyona nto, ugqirha uya kunika unyango olunzulu okanye akuthumele iimvavanyo ezongezelelweyo.
Ukuba awukwazi ukuya kudokotela wamazinyo
Kukho imeko xa ukutyelela kwidokotela wamazinyo kufuneka kuhlehliselwe esinye isizathu. Ukukhusela amazinyo akho ekuqhubeni phambili, kufuneka uhlawule ngenyameko yabo yonke imihla. Kukho iindlela ezininzi zokukunceda uzikhusele:
Jonga ukutya kwakho. Zama ukuphepha ukutya okuqinileyo, okuya kukhulula amazinyo. Nika iiapulo, izaqathe, iinantsi okanye uzidle kwifom etyumkileyo. Kwakhona, ungadli kushushu okanye ukutya okubandayo. Zama ukungadli emva kokubanda okutshisayo kunye nangoko. Akuyimfuneko ukusela utywala, ikhofi kunye nehayi ngeli xesha.
Nangona amazinyo ayengaqinisekanga, awukwazi ukuyeka ukuhlambuluka kwansuku zonke. Ukuba ubukade usebenzisa i-brush ekhuni, yifake endaweni elula. Qaphela kakhulu ukuba ungayikhululi inyoyi ngakumbi. Nika okukhethwa kwinqumle eqinisa i-gum.
Sebenzisa amanxeba angakumbi okuqinisa. Kukho iindlela ezininzi zokupheka ezomeleza amazinyo kunye namazinyo.
Ungalungisa amafutha athile ngokusekelwe kubusi neetyuwa. Ukwenza oku, thabatha i-20 g yobusi kunye ne-5 g yetyuwa, xuba. Gquba amafutha ephupheni kwaye usebenzise kwi-gum. Yibhalele ngokucophelela umxube ekuseni nakusihlwa.
Isisombululo sepropolis sinokusetyenziswa. Ingathengwa kwikhemisi. Dissolve 20 uhla eglasini yamanzi afudumele kwaye ususe umlomo wakho rhoqo emva kokutya.
Sebenzisa ioli yamafutha. Dampen i-cotton ipakishe kuyo kwaye unamathele kwizinsini imizuzu eyi-15. Phinda ulandelelanise imihla ngemihla kwiiveki ezintathu.
I-Garlic iyasebenza. Kwanele ukusika enye inyo kwaye uphese ityum. Yenza oku rhoqo kwiiveki ezimbini kwaye uqiniseke ukuba ubone umphumo.
Kukho nawuphi na, kufuneka uqonde ukuba akukho mpendulo yomntu oza kuthatha indawo yokubonisana nodokotela. Ngoko ke, zama ukuyeka ukutyelela, kodwa ulungele konke, uthathe umgaqo ngamnye kwiinyanga ezintandathu ukutyelela ugqirha wamazinyo, kuba eso sifo sikulungele ukusixwayisa ngexesha, kunokuba siphephe ixesha elide kwaye siphathe kakubi.
Ukuphulukiswa kunye nemilingo ye-barite
Kutheni ikhupha isisu esiswini ngexesha lokukhulelwa?
Indlela yokuphumelela emsebenzini kwiqela labesetyhini
Ukunyameka ngexesha lokutya
Ukuphuculwa komzimba kwintsana engaphambi komntwana
Inkukhu ene-lemon ne-thyme